System Development - Cofttek holdings zvishoma
Cofttek inogona kupa zviyero zvinotevera, izvo zvose zvinotsigirwa nemitemo yedu yakasimba pamusoro pekudzivirira kweIntellectual Property (IP), nekuita kuti mapurogiramu agadziriswe zvakasimba pane chivimbo nguva dzose.
Purogiramu yakakura-kubva kubva
gramu kusvika kuMetric Tones
Kunyatso kuongorora kutsigirwa
kusanganisira HPLC, GC-MS uye NMR
Nokuda kwezvinhu zvinoshandiswa pakugadzirwa kwekugadzira, Cofttek inogona kupa chibvumirano uye kubhadhara mari yekutengesa kumitemo yemutengi. Mukuwedzera kune mazano ataurwa pamusoro apa, tinopawo nyanzvi yekugadzirisa zvinhu zvekugadzirisa zvinhu (pasina mari yakawedzerwa) kuti tive nechokwadi chokuti, pose pazvinogoneka, isu chete tinoshandisa zvitubu zvezvinhu zvakanakisa zvezvinhu pamakwikwi emakwikwi emakwikwi.
Cofttek inokwanisawo kupa sangano rekutsvakurudza uye rutsigiro rwakafanirwa nevatengi 'zvakanakira. Tine nhoroondo yakanakisisa yekugadzirisa zvinetso zvakakosha zvinoshandiswa nevatengi vedu uye mapurojekiti zvingave zvichienderana nehuwandu hwenguva yakazara (FTE) kana mazuva ose. Taura nesu kuti tibvunze kuti tenzi wedu we R & D ane unyanzvi hupi anokwanisa kuita purojekiti yako inotevera kubudirira kwedu kwezvino.